Diyaarado Maanta duqeeyay Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo – SBC
Diyaarado Maanta duqeeyay Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo
Sida ay ku waramayaan wararka ka imanaya Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo maanta xli duhurkii ah waxaa ka dhacday duqeyn ay halkaasi ka geysatay mid ka mid ah diyaaradaha shisheeye oo lagu qiyaasay in ay ahyed mid ay lahaayeen ciidamada dalka Kenya .
Duqeyntaasi ayaa waxaa ay la eegatay diyaarada goob ka mid ah magaalada Baardheere iyadoo sida dadka ay sheegayaan ay gantaalo dhowr ah ku riday laba goob oo u dhexeysa Garoonka diyaaradaha degmadaas iyo xaruntii ADC-da .
Inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday duqeyntaasi hal qof halka 7 kalena ay ka soo gaartay dhaawac, waxaana ay dadkaasi yihiin dad rayid ah oo iyagu goob ka mid ah goobaha la duqeeyay ka agdhowaa.
Xaalada ayaa markii ay dheceen duqeynta isbedeshay iyadoo ay dadku bilaabeen wal wal iyo walaac ay ka qabaan howlahan duqeynta ah inkastoo ay ugu baaqayeen saraakiisha mamulka Baardheere ka arimiya ee Xarakada SHabaab almujaahidiin in ay shacabku is dejiyaan oo aan jirin wax dhibaato ah.
Sikastaba ha ahaatee duqeymaha ceynkan oo kale ah ayaa waxay ka dhacayeen todobaadyadii la soo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka kuwaas oo sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhawacba leh.